အမြိုးသမီးတ ... သူမရဲ့ပုံရိပ်ကိုရာစုနှစ်များစွာကဗျာကဗျာဆရာတွေဆက်ကပ်အပ်နှံ, incorrigible Romantic မနာသီချင်းဆို, စာရေးဆရာများဝတ္ထုဖန်တီးဖို့နဲ့ရုပ်ရှင်ဒါရိုက်တာများကအကြောင်းသူတို့ရဲ့ဇာတ်ကားတွေရိုက်ကူး။
အမြိုးသမီးမြားရဲ့အာရုံငါးပါး - အလွန်ကြီးစွာသောအနုပညာ။ နိုင်ရန်အတွက် လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဖြစ်လာ , ကြီးမားတဲ့ရင်ဘတ်သို့မဟုတ်အပြည့်အဝနှုတ်ခမ်းရှိသည်ဖို့လုံလောကျမဟုတျပါဘူး ... ပုံပန်းသဏ္ဍာန်, သင်တန်း, ပုံရိပ်တစ်ခုဖန်တီးခြင်းအတွက်သိသာထင်ရှားသောအခန်းကဏ္ဍ, ဒါပေမယ့်အမျိုးသမီးတွေရဲ့ကာမဂုဏ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့, ဒီမလုံလောကျပါပဲ။
ကာမဂုဏ်အမြိုးသမီးတ - လူအတော်များများအစိတ်အပိုင်းများပါဝင်သည်သောအပြည့်အဝ, သဟဇာတ image ကို၎င်း, နှစ်ပေါင်းများစွာဖန်တီးခဲ့သည်။
အမြိုးသမီးတဦး၏မေတ္တာကို Self-မေတ္တာနှင့်စတင်ခဲ့သည်။ ဒါကြောင့်သူတို့ရဲ့ကာမဂုဏ်နှိုးဖို့, ကိုယ့်ကိုကိုယ်နှင့်သင့်ခန္ဓာကိုယ်ကိုချစ်ရန်အရေးကြီးပါသည်။ ဒါဟာသူ့နောကျမကွညျ့ဖို့, pampered ရန်လိုအပ်ပါသည်။ ချောမွေ့, velvety အရေပြား, ပုံစံ, သပ်သပ်ရပ်ရပ်နောက်ပြီး, ရေမွှေး၏အလင်းရနံ့ - စုပေါင်းကြောင့်ယောက်ျားရန်သင့်ပုံရိပ်ကိုဆွဲဆောင်မှုစေမည်။
လိင်လည်းပရောပ၏အနုပညာပါဝင်သည်။ ယောက်ျားနှင့်ပရောပရည် - တစ်ဦးအလွန်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းနှင့်စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ဖြစ်စဉ်ကို: languid မျက်စိ, အဆုတ်အမူအရာ, မျက်လုံး flirtatious အပြုံးရိုက်ကူးလှပသွားလစျြလြူရှုအဘယ်သူမျှမကျန်ရစ်။ ဒါဟာနယ်စပ်ကိုလေးစားရန်နှင့်ပေါ့ပေါ့ဆဆပြုမူသှားဖို့မအလွန်အရေးကြီးပါသည်။ ယောက်ျားနှင့်ပရောပရည်, ငါတို့သည်သူ့ကိုမက်ဆေ့ခ်ျကိုပေးအပ်: "။ ငါဖြစ်၏ - အမျိုးသမီးတစ်ဦးသည်, ငါသည်သင်နှင့်တူထိုကဲ့သို့သောသတ္တိသည်လူနှင့်အတူဆငျးရဲသားဖွစျခငျြ"
ကာမဂုဏ်ကိုလည်းထိတွေ့နိုင်သောအာရုံနှင့် lovemaking သာပါဝင်သည်။
စိတ်ပညာမှာတော့နည်းမနောတဲ့အချို့သောနယ်ပယ်ယူထားသော။ တောင်မှရှေးခေတ်ကကျိန် ဆို. ပူဇော်တစ်ခုလုံးကိုကျမ်းပရောပရည်၏အနုပညာပါ။ ကျနော်တို့အီဂျစ်ကပရောဖက်, ဂျပန် geishas နှင့်အခြားလှပသော seductress မှတ်မိနိုင်ပါတယ်။
အမျိုးသမီးကာမဂုဏ်ယောက်ျားသည်မေတ္တာနှင့်ရိုသေလေးစားမှုကိုဆိုလိုသည်။ အမျိုးသမီးတစ်ဦးဟာသူတို့ရဲ့အတှေး, အလိုဆန္ဒများနှင့်စိတ်ခံစားမှုကိုနားလည်ရန်ကြိုးစားပါ, ယောက်ျားသိကြနှင့်သူတို့ခံစားရသင့်တယ်။ ဤကိစ္စတွင်ခုနှစ်, ထိုမိန်းမသည်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယုံကြည်မှုဖြစ်သင့်ပြီးဂုဏ်သိက္ခာရှိရှိထုံးစံ၌ပြုမူ။ ထို့ပြင်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအဆင့်တွင်လူသည်တစ်ဦးဓာတ်အမျိုးသမီးရှိကွောငျးမမေ့မလြော့ပါ။ ဒါဟာဘဝကိုပျော်မွေ့ခြင်းနှင့်ပျော်စရာတိုင်းတခဏပျော်မွေ့နိုင်ပါလိမ့်ဖို့လည်းလိုအပ်ပေသည်။
ဒါဟာအရေးပါတဲ့အခန်းကဏ္ဍနှင့်အဝတ်အစားပါဝင်သည်။ သူမတစ်ဦးအနှစ်သက်ဆုံးကြော့စားဆင်ယင်ခြင်းနှင့်ဒေါက်မြင့်ဖိနပ်အပေါ်ကိုထည့်လေ့မရှိအဖြစ်အကယ်စင်စစ်တိုင်းမိန်းမ, ယောက်ျားများ၏အာရုံကိုသတိပြုမိသည်။ သင်တန်း၏, ဤမိန်းမသည်အဘယ်သူကိုမျှလစျြလြူရှုသောသူသည်စွန့်ခွာမည်မဟုတ်။
ဒါပေမယ့်လည်းလက်လှမ်းကြည့်ရှုဖို့မအချို့တိကျသောစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေကိုလိုက်နာနိုင်ပါလိမ့်ရန်အရေးကြီးပါသည်: လွယ်ကူသောကြိုဆိုရိုးသား, စိတ်ကူးစိတ်သန်းများအတွက်အခန်းကိုစွန့်ခွာ, အမှုအရာ, သင်တို့၏အသက်နှင့်လူမှုရေးအဆင့်အတန်းကို fit သင့်ရဲ့ဗီရိုထဲမှာ asexual သောအရာတို့ကိုရှောင်ရှားရန်ရှိသည် - ugg ဘွတ်ဖိနပ်အကြောင်းကိုမေ့လျော့ဘောင်းဘီနှင့်ရှပ်အင်္ကျီကိုဆန့်။
ကခုန်အတန်းလွတ်မြောက်ခံရဖို့သင်ကူညီကြလိမ့်မည်နှင့်ကိုယ်ခန္ဓာကိုထိန်းချုပ်ဖို့သင်ယူပါလိမ့်မယ်, ဒီတစ်သံသယမရှိဘဲ, အထီးကိုဆွဲဆောင်။ ဦးနှောက်အာရုံကြောကိုရပ်တန့်နှင့်လူတို့၏ဇီဇာကြောင်ခြင်းနှင့်အညစ်မိန်းကလေးတွေမကြိုက်ကြဘူး, အပန်းဖြေဖို့သင်ယူပါ။ အမြဲတမ်းကိုယ့်ကိုယ်ကိုနားထောငျ။ ဤအမှုအလုံးစုံကိုသင်ဖွင့်ဖို့ကူညီပေးပါလိမ့်မယ်။
လျှို့ဝှက်ချက်များကို ဣတ္၏ နှင့်အာရုံငါးပါးနှင့်ယနေ့ unsolved ရှိနေဆဲ, ဒီတော့ကျွန်တော်တို့တစ်ဦးချင်းစီကဒီအနုပညာကိုလေ့လာသင်ယူရန်ဒါအရေးကြီးပါသည်။
ဒါကြောင့်လိင်ကွဲ orientation ကိုအဘယျသို့ဆိုလိုသနညျး
Shibari - လုံးအစီအစဉ်
ဓတေား၏နည်းလမ်းများ - မလိုချင်တဲ့ကိုယ်ဝန်ကိုရှောင်ကြဉ်ရန်5နည်းလမ်းများ
Epiphany ကဧဝ - ဘာလုပ်ဖို့မနှင့်မည်သို့ဤသည်နေ့ရက်ဖြုန်းဖို့?
Amarea ရေကူးဝတ်စုံ 2013
Multivarka အတွက် Plum နှင့်အတူ Pie
Quick Filler ဂေါ်ဖီထုပ်ပိုင်
နှမ်း - အကျိုးခံစားခွင့်များနှင့်ပျက်ဆီး
Sochi ဟိုတယ်များ "အားလုံးပါဝင်နိုင်"
ဘက်တီးရီးယား Vaginosis - ကုသမှု
ထွက်ပေါက် 2014 မှာဒီဇိုင်းဆင်မြန်း